Yakanakisa Yemahara Crypto Signals June 2022 & Crypto News | cryptosignals.org
Akanakisa eCrypto Ekutengesa Mapuratifomu
Chii chinonzi Crypto Market uye nei uchifanira kuitengesa? Mutangi wekutanga
Akanakisa eCrypto Signals Teregiramu Mapoka - Akazara Gwara
Akanakisa Crypto Staking Sites
Akanakisa Bitcoin Brokers
Akanakisa Ethereum Brokers
Nzira yekutenga Basic Attention Token
Maitiro Ekutenga Solana
Mashandisiro Aungaita Leverage
Maitiro Ekuverenga Mapaviri
Maitiro Ekuisa Matengesi
Dzidza Sei Zuva Rekutengesa Crypto
Dzidza ku Swing Trade Crypto
Chii chinonzi Crypto Pips
Tenga Crypto ine Kiredhiti Kadhi
Tenga Crypto neDebit Card
Joinha Yedu VIP Teregiramu Boka
Deposit $250 neToro kuti uwane hupenyu hwese kune yedu VIP Signals
Wana VIP Signals Yemahara!
Tengesa zviuru zveCFDs Tengesa zviuru zveCFDs
Akanakisa Crypto Zviratidzo 2022
CryptoSignals.org iboka revatengesi vane hunyanzvi avo vanga vachitengesa musika we cryptocurrency kubvira 2014
Takasarudza kuumba nharaunda pa teregiramu kuitira kuti vamwe vagone kudzidza kubva kune edu chaiwo macryptocurrency masaini
Joinha Yedu Yemahara Teregiramu
Vhura Zuva Nezuva Cryptocurrency Zviratidzo
Join our VIP boka nekusarudza pasuru pazasi inokodzera iwe, isu tinopa yakazara-yemazuva makumi matatu-mari-yekudzoserwa garandi saka hapana chekurasa nekuyedza edu emhando yepamusoro macryptocurrency masaini.
Kubhadharwa pamwedzi £ 42
2-3 Zviratidzo Zuva Nezuva
82% Yekubudirira Rate
Kupinda, Tora Pundutso & Mira Kurasikirwa
Mari Yekuisa Njodzi Pakutengesa
Njodzi Mubairo Ratio
Most Popular Kubhadharwa Quarterly £ 78
Kubhadharwa BI-GORE £ 114
Kubhadharwa pagore pagore £ 210
Sarudza BEST Brokeri MUNYIKA YAKO
Iva Nyanzvi Mutengesi!
Vhura account nemumwe wevatengesi vedu. Uye tora hupenyu hwese kuwana kune yedu VIP Crypto Zviratidzo zvemahara! Nyoresa uye isa iyo shoma 250 $ neakasarudzwa yedu yakadzorwa Crypto broker pazasi.
eToro ipuratifomu yeasset-yakawanda inopa zvese kuisa mari muForex, Masheya, uye maCryptocurrencies, pamwe nekutengesa zvinhu zveCFD. CFDs zviridzwa zvakaoma uye zvinouya nenjodzi huru yekurasikirwa nemari nekukurumidza nekuda kwekuwedzera.
CFDs zviridzwa zvakaoma uye zvinouya nenjodzi huru yekurasikirwa nemari nekukurumidza nekuda kwekuwedzera. 71.2% yevatengesi vatengesi maakaunzi anorasikirwa nemari pakutengesa maCFD nemupi uyu.
Kusvika pa500: 1 kuwedzera, tengesa zviuru zveCFD uye Leverage zvivakwa zviripo. Indices, FX, Crypto uye nezvimwe munzvimbo imwechete. Isu tinoenda iyo yakawedzera maira nekupa mushandisi-inoshamwaridzika interface uye inovandudza maficha.
Joinha Wedu Yemahara Teregiramu Boka
Isu tinotumira 3 VIP anonongedza pavhiki mune yedu yemahara Teregiramu boka, chiratidzo chega chega chinouya nehunyanzvi hwakazara hwehunyanzvi kuti nei tiri kutora iko kutengeserana uye kuti tingaiisa sei kuburikidza neyako broker.
Tora kuravira kwezvakaita boka reVIP nekujoinha izvozvi MAHARA!
Joinha Yedu Yemahara TeregiramuDzidza nezveZviratidzo zvedu
Imba yeTop-Giredhi Crypto Zviratidzo
Kununurwa Kwakananga Kwako Teregiramu App Munguva Chaiyo-Nguva!
Chikwata chedu chevatengesi vepamba paCryptoSignals.org vanoongorora misika ye crypto nguva dzese saka haufanire. Kuburikidza nekubatanidzwa kwe-kwakadzika tekinoroji kuongororwa, AI algorithms, uye yakakosha kutsvagisa - CryptoSignals.org iri kugara ichitsvaga mikana yekutengesa yenhengo dzedu.
Kana ino iri nguva yako yekutanga kutishanyira, titendere kuti titsanangure zvatiri kuita pano CryptoSignals.org
VERENGA ZVIMWE ZVAKAITWA PAMUSORO PENYAYA DZEDU DZENYAYA NEZVENYAYA
DeFi Coin Price Prediction: DEFC/USD Inosvika madhora 0.15 sezvo Mutengo Uchikwira Kumusoro
Compound (COMPUSD) Mabhuru Anosundidzira Musika muKubatanidza Tactic
Bitcoin Cash (BCH/USD) Mutengo Unofamba Padivi paPazasi Nzvimbo
Polkadot Bulls Dzivirira $6.3 Tsigiro sezvo Inorwisa iyo $8.27 Yakakwirira
Solana Anotanga Blockchain uye Web3-Inoenderana Smartphone, Saga
Synthetix (SNXUSD) Inogara muNzvimbo Yakatengwa.
Bancor (BNTUSD) Bears Ari Kuvavarira iyo $0.150 Support Level
Bitcoin Inova Nyore Kuwana SeMigodhi Dambudziko Inodonha 2.35%
Uniswap (UNI/USD) Mutengo Kunetsekana, Kuchinjika kuAvhareji yemadhora matanhatu
Ripple Inobata pamusoro pe $ 0.30 seBulls Target the High ye $ 0.38
Kwedu Kukunda Cryptocurrency
Chiratidzo VIP Boka
Kana iwe uri mutsva kumusika we cryptocurrency uye ungade kudzidza kuutengesa, gadzirisa njodzi nenzira kwayo uye uwane yako account yekutengesa kuita purofiti wozoona zvimwe nezve izvo zvatinopa pazasi.
Isu tinovavarira kuwana 1500 pips pamwedzi mwedzi wega kutengesa Bitcoin chete!
Zvese zvekutengeserana zvinouya zvizere nehunyanzvi kuongorora, uchitsanangura kuti sei tiri kutora iko kutengeserana, tinoita izvi kuitira kuti iwe ugone kudzidza sezvaunenge uchitengesa.
DZIDZO YEMAHARA MUPENYU
Isu tinotaura zvakajeka iyo RRR (njodzi-mubairo muyero) nekutengeserana kwese uye kushanda pane 1: 2 & 1: 3 chiyero kuitira kuti usambo paza pangozi zvakanyanya pakutengeserana uye uve nemukana wakakwirira wekuita purofiti.
Zviratidzo zvedu zvinongotumirwa kuburikidza neTeregiramu, nenzira iyoyo panongouya chiratidzo, chinouya nekukasira kwauri.
Nekujoinha boka redu reVIP uri kuvhura hupfumi hwezivo uye ruzivo kubva kuvashambadzi vedu, mubhadharo mudiki wemwedzi zvinoreva kuti uri kujoina ELITE
Mabasa edu haagare achiitwa pamusika, saka uchave uine yakawanda nguva yekukwira navo, isu tinoshambadzira zvekutengeserana, ganda remusoro uye isu tinoshandisa dzakasiyana mhando dzekutengesa senge BUY STOPS, SELL STOPS & BUY LIMIT nezvimwe…
Joinha Yedu Yemahara Teregiramu Boka
Isu tinotumira matatu maVIP masvondo pasvondo muboka redu remahara reTeregiramu, chiratidzo chega chega chinouya nehunyanzvi hwakazara hwekuongorora kuti nei tiri kutora kutengeserana uye kuti tingaiisa sei kuburikidza neyavatengesa.
Mashandiro Edu Crypto Zviratidzo
Kana iwe uri mutsva zvachose kune nyika ye crypto zviratidzo, titendere isu kupaza izvo zvakakosha iwe muLayman's Mitemo.
Pfungwa huru yemasaini ekrispto ndeyekuti iwe uchagamuchira zano rekutengesa. Izvi zvichauya kuburikidza neiyo chaiyo-nguva kuburikidza
teregiramu - saka hauzombopotsa mukana wekutengesa mukana. Chiratidzo chega chega icho timu chiripo CryptoSignals.org anotumira ichave iine seti yeruzivo rwakakosha. Iyi iruzivo irwo inokuudza maitiro ekuti uwane purofiti kubva kumasaini edu nekuisa iyo
mirairo yakatarisana kune wawakasarudza broker. Kuti ndikupe zano rekuti chii a CryptoSignals.org crypto chiratidzo chinotaridzika - tarisa iwo muenzaniso we LTC / USD pazasi:
CHIMWE CHIMWE CHEMA
Sezvauri kuona kubva pamusoro, akanakisa macrypto chiratidzo anofanirwa kugara aine mashanu akakosha data mapoinzi. Iyi ndiyo mbiri ye crypto pachayo - iri mumuenzaniso uyu, iri LTC / USD. Iwe uchaona kuti iyo chiratidzo inotsanangudzawo kuti iende kwenguva refu - zvichireva kuti yedu-mumba muongorori anofunga kuti vaviri vacho vachakwira mukukosha. Zvinonyanya kukosha, akanakisa e crypto masaiti anofanirwawo kuuya nemuganhu unodiwa, kumira-kurasikirwa, uye mitengo yekutora-purofiti. Kana iwe uri mutsva kune aya akakosha ekutengesa mazwi, zvakanakisa kuti iwe uve nekunzwisisa kwakasimba kweizvo izvi zvinoreve usati wasaina se crypto chiratidzo sevhisi.
Kubatsira kujekesa mhute, isu tinotsanangura aya akakosha data data mapoinzi mune zvakadzama pazasi.
ZVINO ZVINOFANIRA KUTI ZVIRATIDZO ZVAKANAKA ZVECRYPTO ZVINOFANIRA KUITA SEI?
Heano kuputsika kwekuti akanakisa macrypto zviratidzo anofanira kutaridzika sei - uye kuti izwi rimwe nerimwe rinorevei.
Iyi inotsanangurwa. Mushure mezvose, zvinopera pasina kutaura kuti iwe uchafanirwa kuziva kuti ndeipi joiri chiratidzo chedu chine chekuita nacho. Isu tinofanirwa kucherechedza kuti va-mumba vaongorori paCryptoSignals.org vane hunyanzvi mune dzakasiyana siyana misika ye cryptocurrency. Izvi hazvingori chete izvi zvinosanganisira crypto-to-fiat, asi crypto-to-crypto vaviri, zvakare. Kune avo vasingazive, vaviri vaviri ve crypto-to-fiat vanozove nemari imwe yedhijitari senge Bitcoin uye imwe fiat mari senge dhora reUS. Mumuenzaniso uyu, vaviri vacho vaizomiririrwa seBTC / USD. Sezvineiwo, iri ndiro rinonyanya kutengeswa cryptocurrency vaviri muindasitiri - nemabhiriyoni emadhora achichinja maoko zuva rega rega. Uine izvi mupfungwa, mazhinji emakristpto anonongedzera aunogamuchira kubva kwatiri, CryptoSignals.org ichaisa pamusika uyu. Zvisinei, vatengesi vedu vane ruzivo rwakakwana mukutengesa zvakasiyana-siyana zve crypto-to-crypto pair. Izvi zvinosanganisira zvinofarirwa neBTC / ETH - zvichireva kuti tiri kutengesa mwero wekutsinhana pakati peBitcoin neEthereum. Imwe crypto peya iyo ou ...
Yakareba kana Ipfupi
Iyo yekuwedzera kiyi metric iyo inosungirwa mune iyo crypto chiratidzo nzvimbo ndiyo nzira yemusika. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuenda kwenguva refu kana ipfupi pane iro basa? Pasina ruzivo urwu, iyo crypto chiratidzo chingave chisina kukosha. Kune avo vasingazive: Kana yedu crypto chiratidzo ichikuudza iwe kuti uende kwenguva refu, izvi zvinoreva kuti isu tinofunga kuti vaviri vacho vachawedzera mukukosha Kana yedu crypto chiratidzo ichikuudza iwe kuti upfupike, izvi zvinoreva kuti isu tinofunga vaviri vacho vachadzikira mukukosha Kuti uwedzere kujekesa: Kana iyo crypto chiratidzo ichikuraira iwe kuti uende kwenguva refu, saka unofanirwa kuisa odha yekutenga kune yako yakasarudzwa crypto broker Kana, zvakadaro, iyo crypto chiratidzo ichikuudza iwe kuti upfupike, saka iwe pachinzvimbo iwe unoda kusarudza yekutengesa odha Timu yedu ye vaongorori paPipSignals vakasununguka kuenda kwenguva refu uye mapfupi pane crypto mapara. Nechisimba, hapana hukama hwepamoyo kune yakatarwa mari yedhijitari yatinotengesa. Pane kudaro, chinangwa chedu chikuru ndechekuita purofiti kubva pachinzvimbo. ...
Limit Order Order
Usaite chikanganiso nezvazvo - akanakisa ma crypto masaiti anogara achiuya nemutengo unodikanwa wekuodha. Kana iwe uri mutsva mukutengesa, iwe unowanzo kuve nesarudzo mbiri kana zvasvika pakupinda mumusika. Nokusingaperi, vatengesi vazhinji vepamhepo vanokubvunza kana iwe uchida kuisa 'musika odha'. Izvi zvinongoreva kuti broker achaita yako yekutengesa ipapo - pamutengo unotevera unowanikwa. Kunyangwe izvi zvakanakira kudyara kwenguva-refu, hazvina kunyatsokodzera kutengeswa kwenguva pfupi kwekrispto. Izvi zvinodaro nekuti yakanyanya njodzi-kupokana kupinda mukutengesa pamutengo wakatarwa - sekutsvagisa kwekutanga kwakaitwa. Semuenzaniso, ngatitii isu paCryptoSignals.org tiri kutengesa BTC / USD - iyo parizvino iri pamutengo uri $ 49,500. Chikwata chedu cheva-mumba vaongorori vanogona kutarisa matekinoroji uye voona kuti BTC / USD ikatyora $ 50,000 - ipapo chinzvimbo chakareba chinofanira kutorwa. Kuona kuti isu tinongopinda chete pamutengo uri pamusoro pe $ 50,000 - uye kwete iyo curren ...
Stop-Loss Order Mutengo
Parizvino, isu tavimbisa kuti akanakisa ma crypto masaiti anokuudza iwe kuti ndeapi mapara ekutengesa, kunyangwe iwe uchifanira kuenda refu kana pfupi, uye ndeupi mutengo wekupinda iwe waunofanirwa kuisa yako yekuganhurira odara pa. Zvisinei, iyi inongova hafu yehondo. Mushure mezvose, kuti utengese nenzira ine njodzi-inodzivisa, iwe unofanirwa kuve neyako nzira yekupinda munzvimbo. Zvekare zvakare, isu paCryptoSignals.org tinovimbisa kuti iwe une ruzivo rwese rwaunoda kuti ubatsirwe kubva kumakristpto edu emasaini - ndosaka tichigara tichipa kumira-kurasikirwa uye kutora-purofiti maodha. Nezve kumisa-kurasikirwa, ichi chishandiso chekuchengetedza njodzi icho chinovimbisa kuti hatirasikirwe nemari yakawandisa pane bhizimusi - haifanirwe kuenda kunoronga. Izvi zvakakosha, sekunge kunyangwe isu tiine yakareba-yakamira rekodhi yekunze-kuita musika we crypto - hatiti tinokunda bhizimusi rega rega. Pane kupokana, pachave nekugara kuchirasikirwa nekutengesa. Tichifunga izvi, tinokurudzira mutengo wakakodzera wekumira-kurasikirwa waunofanirwa kuendesa kana uchinge waita pamasaini edu e crypto. Mu cr ...
Tora-Mubatsiri Order Mutengo
Pane chimwe chidimbu chakakosha cheruzivo icho chakanakidzwa nemasaini ekrispto - uye ndiwo mutengo wekuda kutora-purofiti. Izvi zvinoshanda zvakafanana neyekumira-kurasikirwa odha, asi pachinzvimbo chekudzora njodzi dzedu, ichatsvaga kukiya mubhizimusi redu kubva mukutengesa. Mumuenzaniso watakapa kare, takaona kuti yakatarwa mutengo wekutora-purofiti mutengo ndeye $ 238.74. Izvi zvinogara pa3% pamusoro pemutengo wakatemwa wemadhora 231.79 - zvichireva kuti isu tinotsvaga kuwana 3% pane ino chaiyo crypto chiratidzo. Kamwe zvakare, kana mutengo wekutora-purofiti ukafananidzwa nemusika - iyo crypto broker iri mubvunzo ichagumisa bhizinesi. Nekudaro, isu tinogona kukiya mune yedu purofiti pasina kuda kugara pachigadzirwa chedu kuti tibude nemaoko chinzvimbo.
Njodzi vs Mubairo
Tichitungamira kubva pachikamu chiri pamusoro pekumira-kurasikirwa uye kutora-purofiti maodha, timu yedu yevanowongorora kuCryptoSignals.org ichagara iine njodzi / mubairo muyero mupfungwa pakutumira macrypto sign. Mumuenzaniso uri pamusoro, njodzi yaive 1% - sezvo zviri izvo zvakatarwa nemutengo wekumira-kurasikirwa. Chikamu chemubairo cheiyo equation chaive 3% - sezvo ndipo patakaisa yedu yekutora-purofiti odha. Nechisimba, mazhinji emakristpto sign atinotumira anoteedzera 1/3 njodzi / mubairo muyero. Mumashoko akareruka, izvi zvinoreva kuti tiri kuisa pangozi 1% yemari yedu kuti tiwane 3%. Mukuita kudaro, isu tinongoda kuve nekutengeserana kumwe chete kunobudirira kubva pavatatu vese kuti tiite purofiti.
Iyi inotsanangurwa. Mushure mezvose, zvinopera pasina kutaura kuti iwe uchafanirwa kuziva kuti ndeipi joiri chiratidzo chedu chine chekuita nacho.
Isu tinofanirwa kucherechedza kuti va-mumba vaongorori paCryptoSignals.org vane hunyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana dzemisika yemakristptocurrency. Izvi hazvingori chete izvi zvinosanganisira crypto-to-fiat, asi crypto-to-crypto vaviri, zvakare.
Kune avo vasingazive, vaviri vaviri ve crypto-to-fiat vanozove nemari imwe yedhijitari senge Bitcoin uye imwe fiat mari senge dhora reUS. Mumuenzaniso uyu, vaviri vacho vaizomiririrwa seBTC / USD.
Sezvineiwo, iri ndiro rinonyanya kutengeswa cryptocurrency vaviri muindastiri - nemabhiriyoni emadhora achichinja maoko zuva rega rega. Uine izvi mupfungwa, mazhinji emakristpto anonongedzera aunogamuchira kubva kwatiri, CryptoSignals.org ichaisa pamusika uyu.
Zvisinei, vatengesi vedu vane ruzivo rwakakwana mukutengesa zvakasiyana-siyana zve crypto-to-crypto pair. Izvi zvinosanganisira zvinofarirwa neBTC / ETH - zvichireva kuti tiri kutengesa mwero wekutsinhana pakati peBitcoin neEthereum.
Imwe crypto pair iyo yedu in-house vaongorori vanoda kutengesa iXRP / XLM. Izvi zvine Ripple uye Stellar uye inopa yakawanda ye crypto chiratidzo mikana nekuda kwayo kwakanyanya kusagadzikana maitiro.
Iyo yekuwedzera kiyi metric iyo inosungirwa mune iyo crypto chiratidzo nzvimbo ndiyo nzira yemusika. Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuenda kwenguva refu kana ipfupi pane iro basa? Pasina ruzivo urwu, chiratidzo chekrispto chinenge chisina basa.
Kune avo vasingazive:
Kana yedu crypto chiratidzo ichikuudza iwe kuti uende kwenguva refu, izvi zvinoreva kuti isu tinofunga kuti vaviri vacho vachawedzera mukukosha
Kana chiratidzo chedu chekrispto chikakuudza kuti upfupike, izvi zvinoreva kuti isu tinofunga kuti vaviri vacho vachadzikira mukukosha
Kuenderera mberi kujekesa:
Kana iyo crypto chiratidzo ichikuraira iwe kuti uende kwenguva refu, saka unofanirwa kuisa odha yekutenga kune yako yakasarudzwa crypto broker
Kana, zvakadaro, iyo crypto chiratidzo inokuudza iwe kuti upfupike, ipapo iwe pachinzvimbo iwe unoda kusarudza yekutengesa odha
Chikwata chedu chevatsoropodzi paPipSignals vakasununguka kuenda kwenguva refu uye mapfupi pane crypto mapara. Nechisimba, hapana hukama hwepamoyo kune yakatarwa mari yedhijitari yatinotengesa. Pane kudaro, chinangwa chedu chikuru kuita purofiti kubva pachinzvimbo.
Usaite chikanganiso nezvazvo - akanakisa ma crypto masaiti anogara achiuya nemutengo unodikanwa wekuodha. Kana iwe uri mutsva mukutengesa, iwe unowanzo kuve nesarudzo mbiri kana zvasvika pakupinda mumusika.
Nokusingaperi, vatengesi vazhinji vepamhepo vanokubvunza kana iwe uchida kuisa 'musika odha'. Izvi zvinongoreva kuti broker achaita yako yekutengesa ipapo - pamutengo unotevera unowanikwa.
Kunyangwe izvi zvakanakira kudyara kwenguva-refu, hazvina kunyatsokodzera kutengeswa kwenguva pfupi kwekrispto. Izvi zvinodaro nekuti yakanyanya njodzi-kupokana kupinda mukutengesa pamutengo wakatarwa - sekutsvagisa kwekutanga kwakaitwa.
Semuenzaniso, ngatitii isu paCryptoSignals.org tiri kutengesa BTC / USD - iyo parizvino iri pamutengo uri $ 49,500.
Chikwata chedu cheva-mumba vaongorori vanogona kutarisa matekinoroji uye voona kuti BTC / USD ikatyora $ 50,000 - ipapo chinzvimbo chakareba chinofanira kutorwa.
Kuona kuti isu tinongopinda pamutengo uri pamusoro pemadhora zviuru makumi mashanu - uye kwete iwo mutengo wazvino we $ 50,000 - apa ndipo panouya muganho wekuraira.
Mune mamwe mazwi, kuitira kuti bhizimusi redu riitwe pamadhora zviuru makumi mashanu - tinofanirwa kugadzira muganho wekutenga pamutengo uyu. Patinoita, bhuroka yedu ichaita chete kutengeserana kwedu kana uye kana BTC / USD yarova $ 50,000. Kusvika panguva iyoyo, iyo muganho odha inoramba ichimirira.
Mune zvese asi mashoma mashoma kesi, ese e crypto zviratidzo ku CryptoSignals.org anouya nemutengo wakatemwa wekuraira mutengo. Chinhu chega chinosarudzika apa ndechekuti kana tikaona mukana wekutengesera uyo unoda kuitirwa nekukurumidza kuti tirege kupotsa.
Parizvino, isu tavimbisa kuti akanakisa e crypto masaiti anokuudza iwe kuti ndeapi mapara ekutengesa, kunyangwe iwe uchifanira kuenda refu kana pfupi, uye ndeupi mutengo wekupinda iwe waunofanirwa kuisa yako yekuganho odha pa.
Zvisinei, iyi inongova hafu yehondo. Mushure mezvose, kuti utengese nenzira ine njodzi-inodzivisa, iwe unofanirwa kuve neyako nzira yekupinda munzvimbo.
Zvekare zvakare, isu paCryptoSignals.org tinovimbisa kuti iwe une ruzivo rwese rwaunoda kuti ubatsirwe kubva kune yedu crypto zviratidzo - ndosaka tichigara tichipa kumira-kurasikirwa uye kutora-purofiti maodha. Nezve kumisa-kurasikirwa, ichi chishandiso chekuchengetedza njodzi icho chinovimbisa kuti hatisi kurasikirwa nemari yakawandisa pane bhizimusi - kana ichifanira kuenda kunoronga.
Izvi zvakakosha, sekunge kunyangwe isu tiine-yakareba-yakamira rekodhi yekunze-kuita musika we crypto - hatiti tinokunda bhizimusi rega rega.
Pane zvinopesana, pachave nekugara kuri kurasikirwa nemabasa. Tichifunga izvi, tinokurudzira mutengo wakakodzera wekumira-kurasikirwa waunofanirwa kuendesa kana uchinge waita pamasaini edu e crypto.
Mumuenzaniso we crypto chiratidzo chatakapa kare, takaona kuti chinzvimbo chakareba chinofanira kuiswa paBTC / USD pamutengo wekupinda we $ 231.79. Isu takataura zvakare kuti iyo yekumira-kurasikirwa odha inofanira kuiswa pa $ 229.48.
Izvi ndezve chikonzero chakanaka - sezvo izvi zvichimiririra kurasikirwa kukuru kwe1%. Ndokureva kuti, kana BTC / USD ikaenda ichipesana nesu ne1% ikazobaya mutengo we $ 229.48 - odha yekumira-yekurasikirwa ichatanga kupinda. Kana zvadaro, mutengesi we crypto achazotivharira nzvimbo uye tofamba kure nekurasikirwa kudiki kwe1%.
Pane chimwe chidimbu chakakosha cheruzivo icho chakanakidzwa nemasaini ekrispto - uye ndiwo mutengo wekuda kutora-purofiti. Izvi zvinoshanda zvakafanana neyekumira-kurasikirwa odha, asi pachinzvimbo chekudzora njodzi dzedu, ichatsvaga kukiya mubhizimusi redu kubva mukutengesa.
Mumuenzaniso watakapa kare, takaona kuti yakatarwa mutengo wekutora-purofiti mutengo ndeye $ 238.74. Izvi zvinogara pa3% pamusoro pemutengo wakatemwa wemadhora 231.79 - zvichireva kuti isu tinotsvaga kuwana 3% pane ino chaiyo crypto chiratidzo.
Zvekare zvakare, kana mutengo wekutora-purofiti ukafananidzwa nemusika - iyo crypto broker iri mubvunzo ichagumisa bhizinesi. Nekudaro, isu tinogona kukiya mune zvedu purofiti tisingade kugara pachigadzirwa chedu kuti tibude nemaoko chinzvimbo.
Tichitungamira kubva pachikamu chiri pamusoro pekumira-kurasikirwa uye kutora-purofiti maodha, timu yedu yevaongorori paCryptoSignals.org ichagara iine njodzi / mubairo muyero mupfungwa painotumira crypto zviratidzo.
Mumuenzaniso uri pamusoro, njodzi yaive 1% - sezvo ndizvo zvakatarwa nemutengo wekumira-kurasikirwa. Chikamu chemubairo cheiyo equation chaive 3% - sezvo ndipo patakaisa yedu yekutora-purofiti odha.
Nechisimba, mazhinji emakristpto sign atinotumira anoteedzera 1/3 ngozi / mubairo muyero. Mumashoko akareruka, izvi zvinoreva kuti tiri kuisa pangozi 1% yemari yedu kuti tiwane 3%. Mukuita kudaro, isu tinongoda kuve nekutengeserana kumwe chete kunobudirira kubva pavatatu vese kuti tiite purofiti.
Crypto Zviratidzo zveVatangi pa CryptoSignals.org
01. Nzwisisa Musika
Uri kutsvaga here kutengesa macryptocurrencies seBitcoin,
Ethereum, uye Ripple - asi vane zvishoma kusanzwisisa kwekuti musika uyu unoshanda sei?
Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kuziva kuti vatengesi vane ruzivo vakapedza makore vachidzidza hunyanzvi hwekuongorora kwehunyanzvi. Izvi zvinoreva
kuita kutsvagisa kwepamberi pamitengo yemari yedhijitari kuburikidza nezviratidzo zvakasiyana siyana. Funga uchitevedza mitsara yeiyo RSI, MACD, Kufambisa Avhaji, uye zvimwe.
02. Wana hunyanzvi-seti yedu
Chokwadi ndechekuti - kana iwe usina hunyanzvi-hwakagadzirirwa kuita hunyanzvi
kutsvagisa padanho repamberi, iwe uchanetseka kuita
zvinowirirana zviwanikwa muiyo crypto yekutengesa indasitiri. Panzvimbo iyoyo, pane mukana wese wekuti iwe ufuridze kuburikidza neakaundi account yako. Nekudaro, izvi zvinokutendera iwe kuti utengese misika ye cryptocurrency usingade kuisa chero cheiyo legwork.
Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kucherechedzawo kuti yedu crypto zviratidzo hazvisi chete akakodzera ma newbies. Pane zvinopesana, iwe unogona kunge usine nguva yekutsvaga pamisika. Saka nekudaro, CryptoSignals.org inogona kubatsira vatengesi veese hunyanzvi-seti!
03. Tengeserana neNzira
Apa ndipo panogona kubatsira CryptoSignals.org. Sezvo isu tichitsanangura zvakadzama tichienderera mberi pasi, edu e crypto zviratidzo anokuudza
zvese zvaunoda kuti uzive kutengesa nenzira yenjodzi-inodzivisa. Ndokureva, kana iwe uchinge wagamuchira chiratidzo kubva kwatiri - iwe unozoziva kuti ndeapi ma crypto maviri ekutengesa, kunyangwe iwe uchifanira kuenda wakareba kana mupfupi, uye ndeipi yekupinda uye yekubuda mutengo kunanga.
Ndo Zvinotaurwa Nevatengi Vedu
Ndakanga ndisingazive zvandaiita asi kubvira pandakapinda muboka remahara teregiramu ini zvino ndavhura account ne nyanzvi bhuroka uye ndiri izvozvi zvinotevera kutengeserana kubva kuboka reVIP. Ini zvino ndoverenga iyo yehunyanzvi hwezuva nezuva hwetekinoroji uye tevera iyo youtube mugero uye ona mavhidhiyo ose.
Ini ndadzidza zvakawanda zvakawanda nezve crypto kubvira pajoinhi VIP Telegraph boka. Ikoko zvinyorwa zvezuva nezuva ndinokwanisa verenga wobva watengesa kuti utsigire izvo ruzivo. Zviri gumi kubva pa10 kwandiri.
Ini ndakabatana neTeregiramu yemahara ndichibva ndakurumidza kukwidziridzwa kuboka reVIP. Ini ndinoona iyo technical technical ichidzidzisa chaizvo uye izvo zvinonyatsondibatsira kudzidza zvakawanda nezve cryptocurrency uye maitiro ekutengesa.
Zviratidzo zvinopihwa zviri nyore kwazvo kutevera.
TINOTUMIRA KWAKAZARA KWEMAWONEKESI ANALYSIS NEZVESE DZVANHU, ONA MIENZANISO YEDU MABHASI PASI PASI!
Vatengesi Vedu Vakatsvagiswa Kubva Kutengesa Pasi Panowanikwa Pasi Pose Pasi!
Iwe unogona kujoina iyo yemahara VIP Boka pazasi nekudzvanya bhatani kuti uone mienzaniso yekutengesa kwedu.
YEMAHARA BEST CRYPTO SIGNALS
Kwete chete iwe yaunoda kuti uwane yakanakisa crypto zviratidzo zvinowanika mumusika - asi zvakare yepamusoro-ratidziro broker yekuisa inodiwa maodha. Mushure mezvose, pasina akanaka bhuroka parutivi rwako, iwe haugone kuwana iyo crypto nzvimbo yekutengesa.
Usati watombotarisa fizi nemakomisheni, zvakakosha kuti iwe ushandise yedu crypto zviratidzo neakagadzwa, anovimbwa broker. Nehurombo, yakawanda yenzvimbo yekutengesa ye crypto inoshanda isina rezinesi rezvemitemo - izvo zvinonetsa kwazvo. Taura zvakapusa, izvi zvinoreva kuti broker haadi kupindura kumubatanidzwa wezvemari werudzi rupi zvarwo - saka zvinhu zvakaita sekuchengetwa kwevatengi uye kudzivirirwa kwevatengi kazhinji hazviite. Kubatsira kunongedzera iwe munzira kwayo - mamwe eakakosha maodhi munzvimbo ino anosanganisira iyo FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), uye CySEC (Cyprus). ...
Makomisheni uye Anopararira
Sevamwe vedu crypto zviratidzo vanonongedzera nekukurumidza uye zvine mwero kuwana, zvakakosha kuti usarudze broker inopa yakaderera makomisheni uye yakasimba kupararira. Nezve izvo zvekare, kune akawanda ma crypto broker anoshanda munzvimbo inokutendera iwe kuti utengese komisheni-yemahara. Izvi zvinoreva kuti iyo chete mari yauchabhadhara inouya kuburikidza nekupararira.
Haasi ese mitezo yedu muboka reCryptoSignals VIP Teregiramu ine huwandu hukuru hwemari yekutengesa nayo. Kana izvi zvichirira senge iwe, izvi hazvireve kuti haugone kubudirira pazviratidzo zvedu. Pane kupokana, nekushandisa crypto broker iyo inopa mukana, iwe unozogona kutengesa nezvimwe kupfuura zvaunazvo muaccount yako. Huwandu hwekuwedzera iwe hwaunogona kuwana zvinoenderana nezvinhu zvinoverengeka - senge broker ari mubvunzo uye nyika yaunogara.
Kungoti bhuroka rako raunosarudza rinopa misika yemari yedhijitari, izvi hazvireve kuti zvichave zvakakodzera chiratidzo chedu chekristpto. Mushure mezvose, timu yedu yeva-mumba vaongorori vanofarira kutora nzira dzakasiyana dzekutengesa - zvichireva kuti vanovavarira crypto vaviri vaviri veese maumbirwo uye hukuru. Semuenzaniso, imwe chiratidzo inogona kuenderana neBTC / USD nepo inotevera ichizotarisa kubatsirwa kubva kuETH / XRP! Uine izvi mupfungwa, zvakanakisa kushandisa crypto broker iyo inopa mirwi yemisika - inovhara zvese crypto-to-fiat uye crypto-to-crypto vaviri vaviri.
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti yako yakasarudzika crypto broker inopa yako yaunoda nzira yekubhadhara. Mapuratifomu akanakisa atinoda kushandisa kupa debit / kiredhiti kadhi uye e-chikwama madipoziti. Izvi zvinokutendera iwe kuti ubhadhare ipapo ipapo account yako uye muzviitiko zvakawanda - mahara. Iwe ungangoda kudzivirira mapuratifomu ayo anongogamuchira kubhengi waya kubhadhara. Izvi zvinodaro nekuti zvinogona kutora mazuva mashoma kuti mari iuye.
Izvo zvinodaro kuti Bitcoin ndiyo iri kure kwazvo inotengeswa cryptocurrency mumusika uno. Saka nekudaro, vatengesi vedu vanogara vachitarisa kuti vawane purofiti kubva kune ino yakawanda mvura kirasi. Nepo mune dzakawanda zviitiko isu tinotumira edu eBitcoin ekushambadzira masheni paBTC / USD - isu zvakare tinofukidza crypto-kune-crypto vaviri vaviri. Semuenzaniso, kana vedu vari-mumba vaongorori vachifunga kuti BTC yakakurisa pamusoro peETH - isu tinotumira chiratidzo cheBitcoin chekutengeserana nezvatakawana. Kukupa iwe zano rekuti akanakisa sei Bitcoin ekutengeserana anonyorera anoshanda pano paCryptoSignals.org - tarisa muenzaniso pazasi. Pair: BTC / USD Kodhi: Sho ...
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti akanakisa e crypto zviratidzo anowanikwa mumusika anowanikwa kuburikidza neboka reTeregiramu. Izvi zvinodaro nekuti iwe uchagamuchira mhando dzemakristpto chiratidzo mune chaiyo-nguva - zvichireva kuti hauzombopotsa mukana wekuita purofiti zvakare! Iwo akanakisa crypto anoratidza materegiramu mapoka anowanzove nezviuru zvemitezo inoshanda. Izvi zvinobvumidza iwe uye nevamwe vako nhengo kuti mukurukure crypto pfungwa yekutengesa kuburikidza neapp. Iwo akanakisa e crypto chiratidzo Teregiramu mapoka anouyawo neiyo chaiyo-nguva mutengi rutsigiro. Kunyanya zvakanyanya kukosha, nekutambira emasaini masaiti kuburikidza neTeregiramu - yakanakisa provid ...
Usati watombotarisa fizi nemakomisheni, zvakakosha kuti iwe ushandise yedu crypto zviratidzo neakajairwa, anovimbika broker.
Nehurombo, yakawanda yenzvimbo yekutengesa ye crypto inoshanda isina rezinesi rekuraira - izvo zvinonetsa kwazvo.
Taura zvakapusa, izvi zvinoreva kuti bhuroka haidi kupindura kumubatanidzwa wezvemari werudzi rupi zvarwo - saka zvinhu zvakaita sekuchengetwa kwevatengi uye kudzivirirwa kwevatangi hazviwanzo.
Kubatsira kunongedzera iwe munzira kwayo - mamwe eakakosha maodhi munzvimbo ino anosanganisira iyo FCA (UK) SEC (US), ASIC (Australia), uye CySEC (Cyprus).
Sevamwe vedu crypto zviratidzo vanonongedzera nekukurumidza uye zvine mwero kuwana, zvakakosha kuti usarudze broker inopa yakaderera makomisheni uye yakasimba kupararira.
Nezve izvo zvekare, kune akawanda ma crypto broker anoshanda munzvimbo inokutendera iwe kuti utengese komisheni-yemahara. Izvi zvinoreva kuti iyo chete mari yauchabhadhara inouya kuburikidza nekupararira.
Kungoti bhuroka rako raunosarudza rinopa misika yemari yedhijitari, izvi hazvireve kuti zvichave zvakakodzera chiratidzo chedu chekristpto.
Mushure mezvose, timu yedu ye-in-house vaongorori vanofarira kutora nzira dzakasiyana mukutengesa - zvichireva kuti vanovavarira crypto vaviri vaviri veese maumbirwo uye hukuru. Semuenzaniso, imwe chiratidzo inogona kuenderana neBTC / USD nepo inotevera ichizotarisa kubatsirwa kubva kuETH / XRP!
Uine izvi mupfungwa, zvakanakisa kushandisa crypto broker iyo inopa mirwi yemisika - inovhara zvese crypto-to-fiat uye crypto-to-crypto vaviri vaviri.
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti yako yakasarudzika crypto broker inopa yako yaunoda nzira yekubhadhara. Mapuratifomu akanakisa atinoda kushandisa kupa debit / kiredhiti kadhi uye e-chikwama madipoziti. Izvi zvinokutendera iwe kuti ubhadhare ipapo ipapo account yako uye muzviitiko zvakawanda - mahara.
Iwe ungangoda kudzivirira mapuratifomu ayo anongogamuchira kubhengi waya kubhadhara. Izvi zvinodaro nekuti zvinogona kutora mazuva mashoma kuti mari iuye.
Izvo zvinodaro kuti Bitcoin ndiyo iri kure kwazvo inotengeswa cryptocurrency mumusika uno. Saka nekudaro, vatengesi vedu vanogara vachitarisa kuti vawane purofiti kubva kune ino yakawanda mvura kirasi.
Nepo mune dzakawanda zviitiko isu tinotumira edu eBitcoin ekushambadzira masheni paBTC / USD - isu zvakare tinofukidza crypto-kune-crypto vaviri vaviri. Semuenzaniso, kana vedu vari-mumba vaongorori vachifunga kuti BTC yakakurisa pamusoro peETH - isu tinotumira chiratidzo cheBitcoin chekutengeserana nezvatakawana.
Kukupa iwe zano rekuti akanakisa sei Bitcoin ekutengeserana anoshanda anoshanda pano paCryptoSignals.org - tarisa muenzaniso pazasi.
Muganhu: $ 61,500
Mira-Kurasikirwa: $ 62,000
Tora-Mubatsiro: $ 57,000
Chiratidzo cheBitcoin chiratidzo pamusoro apa chinoratidza kuti vatengesi vedu vemuimba vanotenda kuti BTC / USD ichaderera mumaawa ari kuuya. Asi, hatidi kupinda mumusika kunze kwekunge vaviri vacho varova nzvimbo yedu yekuda - iyo mumuenzaniso uyu iri $ 61,500.
Kuona kuti takavharwa muchiitiko chekuenderera kumusoro, swedera yeBitcoin inokurudzirawo mutengo wekumira-kurasikirwa kwe $ 62,000.
Ichi chinhu chatinogara tichipa kana tichigovera mhando yedu yeBitcoin masaini - sezvo isu tichinyatsoziva nezvekutengesa njodzi. Yedu Bitcoin zviratidzo zvekutengeserana zvakare zvine yakarongedzwa kutora-purofiti odha. Kana zvikakonzerwa, izvi zvinobva zvavharira muzvibereko zvako kune yako yakasarudzika crypto broker.
Mahara Bitcoin Kutengesa Zviratidzo
Uri mumusika wemahara Bitcoin masaini? Kana zvirizvo, isu paCryptoSignals.org tinopa yemahara Bitcoin chiratidzo sevhisi iyo ine matatu ekutengesa mazano pavhiki. Kusiyana nevazhinji vavanokwikwidza - hatikukumbire kuti ubhadhare imwe mari kuti uburitse muganho wekuraira kana wekumisa-kurasikirwa mutengo.
Pane kupokana, iwe unowana rwese ruzivo rwatakakurukura pamusoro - saka ndiwo mapara eBitcoin, akareba kana mapfupi chinzvimbo, uye muganho, kumisa-kurasikirwa, uye mitengo yekutora-purofiti.
Icho chikonzero chekuti isu tinopa emahara Bitcoin ekutengesa masaini ndeyekuti izvi zvinobvumidza mitezo mitsva kuti iongorore sevhisi yedu kunze isati yaita kuzvipira. Nechisimba, zvese zvaunoda kuti uite kuti ugamuchire edu emahara Bitcoin anonyoresa kunyoresa account nesu pano paCryptoSignals.org.
Iwe haufanire kuisa chero mari kuti uwane mukana kune yedu yemahara crypto yekutengesa zviratidzo. Asi, kana iwe uchinge wanyoresa - iwe unogona kunanga wakananga kune yedu yemahara Teregiramu chiratidzo chiratidzo!
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti akanakisa e crypto zviratidzo anowanikwa mumusika anowanikwa kuburikidza neboka reTeregiramu. Izvi zvinodaro nekuti iwe uchagamuchira mhando dzemakristpto chiratidzo mune chaiyo-nguva - zvichireva kuti hauzombopotsa mukana wekuita purofiti zvakare!
Iwo akanakisa crypto anoratidza materegiramu mapoka anowanzove nezviuru zvemitezo inoshanda.
Izvi zvinokutendera iwe nehama dzako nhengo kuti mukurukure pfungwa dzekutengesa crypto kuburikidza neapp
Iwo akanakisa crypto anoratidza materegiramu mapoka anouyawo neiyo chaiyo-nguva mutengi rutsigiro.
Zvinotonyanya kukosha, nekugamuchira masaini emhando yepamusoro kuburikidza neTeregiramu - vanopa zvakanakisa munzvimbo ino vanozonamatira girafu kana chati kune rimwe zano.
Mune mamwe mazwi, akanakisa e crypto anoratidza materegiramu mapoka anobvumidza iwe kuwana uye kudzidza panguva imwe chete.
Usati watanga neyakanakisa crypto zviratidzo Teregiramu yeboka rako raunosarudza - isu tinopa zano rekumisikidza tsika yekuzivisa. Nekuona kuti ichi chiziviso cheruzha chakasarudzika kune yako crypto zviratidzo Teregiramu boka - iwe uchaziva kuvhura iyo app ipapo ipapo kuti iwe ugone kuisa akataurwa maodha.
Yemahara Crypto Signals Teregiramu Boka
Vamwe venyu vangangoda kuyedza yedu yemhando crypto zviratidzo kunze usati wavandudza kune yedu yekutanga chirongwa. Kana zvirizvo, iwe uchave unofara kuziva kuti isu tinopawo yemahara crypto zviratidzo Teregiramu boka. Paunenge iwe wabatana needu anogara achikura Teregiramu chiteshi - iwe unogashira 3 x yemahara crypto zviratidzo pavhiki.
Izvi zvinogona kuvhara crypto-to-crypto vaviri vakaita BTC / EUR, BTC / USD, kana ETH / USD. Mune zvimwe zviitiko, mamwe emahara edu emasaini emakristpto anofukidza maviri ane zvinhu zviviri zvemadhijitari. Semuenzaniso, tinogara tichitumira edu emahara crypto masaiti paBTC / ETH, BTC / XRP, uye ETH / LTC.
Kamwe iwe paunogashira yemahara crypto chiratidzo kuburikidza neyedu Teregiramu boka - zvese zvaunoda kuti uite kuenda pamusoro kune waunosarudza broker uye isa iwo akarairwa maodha. Muchokwadi, kana iwe uri mutengesi akangwara - iwe ungangofunga kusarudza kutiyedza isu kuburikidza neyemahara brokerage demo account.
Mukuita kudaro - iwe haufanire kuisa panjodzi imwe chete pane edu emahara crypto zviratidzo. Panzvimbo iyoyo, iwe unenge uchiisa maodha edu akataurwa ne'pepa mari ' Mushure mekunge imwe nzvimbo yechiratidzo yavharwa - unogona kunyora pasi mhedzisiro yechinzvimbo.
Semuenzaniso, kana isu takagadzira makumi maviri nemashanu mapipi pane yemahara crypto chiratidzo, ive shuwa yekunyora chinyorwa cheichi. Pakupera kwekuyedzwa kwako - kana iwe ukaona kuti edu emahara ma crypto zviratidzo asangana nezvako zvaunotarisira - unogona kufunga kukwidziridzwa kune yedu yekutanga chirongwa. Mukuita kudaro, iwe unogashira 25-3 premium crypto masaini mazuva ese!
CHII CHINOSANGANISWA MUYEDU YEDU VIP CRYPTO SIGNAL TELEGRAM BOKA
Joinha edu aripo zviuru gumi+ nhengo kubva kunze kwepasirese anga achibatsirwa kubva kwedu VIP Crypto Zviratidzo uye vave vatengesi vane hunyanzvi.
2-3Crypto Signals Zuva
10k +Teregiramu Nhengo
ANOBUDIRIRA CRYPTO TADZIRA?
CryptoSignals.org iboka revatengesi vane hunyanzvi avo vanga vachitengesa misika ye cryptocurrency kubvira 2014, takafunga kuumba nharaunda pa teregiramu kuitira kuti vamwe vagone kudzidza kubva kune edu chaiwo macryptocurrency masaini
Yakanakisa Yemahara Crypto Signals May 2022 & Crypto News
© 2022 CRYPTOSIGNALS.ORG. ZVESE ZVAKANAKA ZVAKANYANZWA.
Ruzivo rwuri pa cryptosignals.org webhusaiti uye mukati meboka redu reTeregiramu rakagadzirirwa zvinangwa zvekudzidzisa uye harifanirwe kutorwa sezano rekudyara. Kutengeserana misika yemari inotakura mwero wepamusoro wenjodzi uye inogona kunge isina kukodzera kune vese vanoisa mari. Cryptosignals.org haitore mutoro wekurasikirwa kwakaitika nekuda kwezvakapihwa mukati memapoka edu eTeregiramu.
Crypto Signals Team haina kumbokubata iwe zvakananga uye usambokumbira kubhadhara. Isu tinotaurirana nevatengi vedu kuburikidza [email inodzivirirwa] Isu tine imwe chete yemahara Telegraph chiteshi inogona kuwanikwa pane saiti. Boka reVIP rinowanikwa mushure mekutenga kunyoreswa. Kana iwe ukagashira chero meseji kubva kune chero munhu, ndapota iudze uye usabhadhara chero. Iyi haisi Crypto Signals Team